အစာစားပြီးချိန် စပ်ကြားတွင် ကျွေးသည့် အဆာပြေသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။ (ဖျော်ရည်ရွေးချယ်ခြင်း) ￼ – Pediasure
အစာစားပြီးချိန် စပ်ကြားတွင် ကျွေးသည့် အဆာပြေသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။ (ဖျော်ရည်ရွေးချယ်ခြင်း) ￼
အစာစားပြီးချိန် စပ်ကြားတွင် ကျွေးသည့် အဆာပြေသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။ (ဖျော်ရည်ရွေးချယ်ခြင်း)
အသီးအနှံအရည်ဖျော်ခြင်းသည် ကလေးများအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ရုံသာမက ရေဓာတ်ကိုပါ ဖြည့်ပေးသောကြောင့် ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖျော်ရည်များအားလုံးသည် တစ်ပုံစံတည်းထုတ်လုပ်ထားခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် အိမ်တွင် သကြားမထည့်ပဲ သစ်သီးအဖတ်လေးများ ပါဝင်အောင် ပြုလုပ်ထားသော သစ်သီးဖျော်ရည်များသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ ကဲ့သို့သော အဓိက အစာစားသည့်အချိန်များအတွက် အာရုံစိုက်ပေးခြင်းသည် သင်၏ကလေးကို အာဟာရဓာတ်အမြောက်အများ ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ထိုအချိန်များ၏ ကြားထဲတွင်ကျွေးသော အထူးသဖြင့် ဖျော်ရည်များသည်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ အရေးပါပါသည်။ ရေဓာတ်သည် သင့်ကလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်နှင့် ခွန်အားရှိစေရန် အထောက်အကူပြုပေးသော အရာဖြစ်သည်။ နို့သည်လည်း အရိုးများသန်မာစေသည့် အရေးပါသော သောက်စရာများထဲတွင် တစ်ခုပါအဝင်ဖြစ်သောကြောင့် မမေ့သင့်သည့်ပါ။5 သို့သော် နို့ တစ်မျိုးတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါက ကလေးများအတွက် အာဟာရဓာတ် ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သော Pediasure 3+ က လိုအပ်သော ထောက်ပံ့မှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။6
ဦးဆုံးအနေဖြင့် ရေကို ရွေးချယ်ပါ။
ရေသည် သင့်ကလေး၏ ရေဆာခြင်းကို ပြေစေသည့်နေရာတွင် အရေးပါသည်သာမက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆဲလ်များအားလုံး၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်လည်း မရှိမဖြစ် အရေးပါပါသည်။ တစ်ခါသောက်သုံးမှုတိုင်းတွင် ကယ်လိုရီ0သာပါဝင်ပြီး အာဟာရဓာတ်များကို လိုအပ်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိအောင် ကူညီပို့ဆောင်ပေးသည့် အရာဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ရေကို ၄ခွက်မှ ၈ခွက်အထိ သောက်သော ကလေးသည် ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှုတည်၍ စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းပိုများခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအား တိုးတက်ခြင်းတို့ကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ရေသောက်နှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သဘာဝ သစ်သီးများနှင့် ရောစပ်ခြင်း၊ သစ်သီးအတုံးလေးများပါဝင်သော ရေခဲတုံးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ သဘာဝ သစ်သီးဖျော်ရည်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ရေခဲချောင်းများ ကျွေးခြင်း သို့မဟုတ် ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများသော သစ်သီးများ ကျွေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဥပမာ – ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများသော သစ်သီးများမှာ ဖရဲသီးများ၊ နာနတ်သီးများနှင့် သခွားသီးများတို့ဖြစ်ပါသည်။1
သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည်များတွင် အာဟာရဓာတ်များ ပိုမိုပါဝင်ပါသည်။
စတိုးဆိုင်များမှ ဝယ်ယူသည့် အသင့်ထုပ်ပိုးထားသော သစ်သီးဖျော်ရည်များတွင် အာနိသင်ဖြည့်ထားသော ဗီတာမင်များနှင့် သတ္တုဓာတ်များပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် သကြား အမြောက်အများပါဝင်ပြီး အိမ်လုပ်ဖျော်ရည်များ ကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသည့် အမျှင်ဓာတ်များ ပါဝင်မှု မရှိသလောက် နည်းပါးပါသည်။ ဖျော်ရည်ထဲတွင် သစ်သီးအဖတ်လေးများ ပါဝင်နေသရွေ့ သစ်သီးအရည်ဖျော်ခြင်းသည် သင့်ကလေး၏ တစ်နေ့တာအတွက် သစ်သီးစားသုံးမှု ပမာဏကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အသီးအနှံအရည်ဖျော်ခြင်းသည် သစ်သီးများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်သဖြင့် သခွားသီးနှင့် မုန်လာဥတို့ကဲ့သို့သော အသီးအရွက်များ ကိုလည်း ထည့်ဖျော်နိုင်ပါသည်။2 ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေသော အရွက်များဖြစ်သည့် ဟင်းနုနယ်ရွက်နှင့် ကိုက်လန်ရွက်တို့၏ အနံ့အရသာကို ဖုံးနိုင်ရန်အတွက် ပန်းသီးများ၊ သစ်တော်သီးများ၊ လိမ္မော်သီးများထည့်၍ ဖျော်ထားသော ဖျော်ရည်ကို တိုက်ခြင်းဖြင့် သင်၏ကလေးသည် ဗီတာမင် အေ နှင့် စီ ( ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အထောက်အကူပြုသည်)၊ ဗီတာမင် K1 ( အရိုးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်)နှင့် အစာမှ စွမ်းအင်သို့ပြောင်းလဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဗီတာမင် B6 တို့ကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။3
နွားနို့သည် ကြွက်သားကျန်းမာရေးနှင့် ကလေးများအတွက် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အလှမ်းမှီစေသော အရိုးသန်မာမှုတို့ အတွက် အရေးပါသည့် ဗီတာမင် ဒီ၊ ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့် ပရိုတိန်းတို့ ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းမွန်သော အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နွားနို့သောက်နိုင်သောကလေးများအတွက် တစ်နေ့စာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် အစားအစာမှရရှိသော အာဟာရဓာတ်များနှင့်အတူ နွားနို့ကိုတစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ် ( တစ်ခါသောက်လျှင်၂၅၀ မီလီလီတာ ) သောက်ရမည်ဟု အကြံပြုထားပါသည်။4, 5
ထို့အတူပင် အပင်မှရသော ပဲနို့၊ ဗာဒံသီးတို့သည် တူညီသော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ထိုထုတ်ကုန်များ၏ အရသာကြောင့် ကလေးများသည် အများအားဖြင့် မကြိုက်ကြပါ။ ထိုအချက်ကြောင့် မိဘများအနေဖြင့် နို့မသောက်ခြင်းကြောင့် မရရှိလိုက်သော အာဟာရဓာတ်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကလေးအာဟာရ ဖြည့်စွက်စာများကို ရှာဖွေရတတ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Pediasure 3+ ကလေးများအတွက် ဖော်စပ်ဖြည့်စွက်စာ နို့မှုန့်သည် သည် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော အာဟာရဓာတ် ၃၇မျိုး၊ အာဂျင်နင်းတို့အပြင် လိုအပ်သောနေရာများ၏ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အပိုအထောက်အကူပေးသော ဗီတာမင် K2 တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Pediasure ကလေးအာဟာရဖြည့်စွက်စာ နို့မှုန့်သည် ကလေးများကြိုက်နှစ်သက်သော အရသာ ရှိပြီး မစ်ရှိတ်ပုံစံမျိုး ဖျော်၍ရသည့်အပြင် ရေခဲချောင်းအဖြစ် ပြုလုပ်၍လည်းရသောကြောင့် သင့်ကလေး၏ တစ်နေ့စာ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် လိုအပ်ချက်များကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခုပဲ Pediasure Myanmar website သို့ ဝင်ရောက်ပြီး Pediasure 3+ နမူနာ ရယူလိုက်ပါ။ 6
^^ Alarcon PA, et al. Clin Pediatr (Phila). 2003